Moscow State University of Engineering Civil - Study in Russia
Moscow State University of Engineering Civil Details
gaabinta : MGSU
aasaasay : 1921
Ha iloobin in aad wada hadlaan Moscow State University of Engineering Civil
Qor at Moscow State University of Engineering Civil
University Research Qaranka “Moscow State University of Engineering Civil” - Waa hay'ad ugu horeeysa ee Federation Ruush ah oo duurka ku ah dhismaha iyo waxbarashada naqshadda. Jaamacadda waxay bixisaa tababarka (nooc kasta oo waxbarasho: waqti buuxa, waqti-dhiman, oo ay ku jiraan tababarka iyadoo la isticmaalayo oo ka mid ah xubno ka mid ah farsamooyinka waxbarashada masaafada). Waxbarashada waa suurto gal on miisaaniyadda ama bixiyo sal u. MGSU waa qaybgale ee tartanka on filiation ee jaamacadaha ee Federation Ruush ee xaq ah xulashada madax banaan for tababarka ku saleysan kootada ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Federation Ruush ah musharaxiinta oo ku guuleysatay ka mid ah iyo sidoo kale-samaynta Olombikada “Waa wakhti ay ku bartaan Russia!”. Ardaydaas waxaa la siiyaa hostel hagaagay iyo ammaan ku yaalla campus ee University ee 15-min. ka dhismayaal waxbarasho oo socon; qolalka hostel ah waxaa loogu talagalay 2 iyo 3 dadka. Waxaan sidoo kale waxay bixiyaan taageero diiwaan-iyo-fiisaha iyo daryeel caafimaad. Waxaan bixinaa ardayda Sayniska iyo Farsamada Library, Palace ee Sports, adeeg taageero nafsi ah, qolka cuntada casri ah , xarumaha madadaalada ee gobolka Moscow iyo badda Azov, tours meelaha iyo ka qaybgalka nolosha sayniska iyo dhaqanka ee Jaamacadda.
Institute of Construction iyo Architecture
Institute of Haydarooliga Engineering iyo Dhismaha Power Plant
Institute of Engineering iyo nolaato Construction iyo Mechanization
Institute of Economics, Management Information Systems iyo in Dhismaha iyo Estate Real
Institute of Education aasaasiga ah
Institute of Education International iyo Isgaarsiinta Language
Moscow State University of Engineering Civil (No MGSU) waxaa la aasaasay sannadkii 1921. Ka hor 1993 waxaa loo yaqaan Moscow Institute of Civil Engineering magacaabay ka dib markii V.V. Kuibyshev (HAWLGALKA). Waa mid ka mid ah machadyada farsamada ugu da'da weyn ee waxbarashada sare ee Ruushka. MISI la aasaasay oo ku saleysan college injineernimada sokeeye Dhexe, tan 1907.The waaxaha ugu horeeyay ee lagu aasaasay ayaa «warshadaha iyo injineernimada sokeeye», «Sahayda biyaha iyo qashin biyo», «Hydrotechnical iyo injineernimada gaar ah», «Heat iyo gaaska iyo hawo» iyo «Mechanisation iyo qalabaynta of injineernimada sokeeye». by 1933 in ka badan 5000 ardayda bartay machadka iyo macalimiinta ku lahaa 600 people. The buugaagta ugu horeysay ee maadooyinka taacliinta oo dhan injineernimada sokeeye ayaa waxaa ku qoran iyo shaybaarrada cilmi badan koorsooyinka postgraduate ayaa abaabulay waagaas. In 1935 Moscow Institute of Civil Engineering ayaa loo magacaabay ka dib markii V.V. Kuibyshev, oo waxay qaadday horyaalka ilaa 1993, markii la habayn galay Moscow State University of Engineering Civil. In ka sano post-dagaal Institute waxaa si firfircoon horumarinta jiho kasta, waaxaha cusub iyo Caqlina ayaa waxaa la aasaasay, arday badan ay go'aansatay in ay wax ka barato waxa ay ka, kuliyadda ayaa sii kordhaya tirada. saynisyahano MISI ahaayeen fulinta cilmi tacliimeed asaasiga ah, Machadka sameeyey xiriirka iyo iskaashiga sameeyay sayniska la machadyada Ruush ah iyo kuwa shisheeye ee tacliinta sare. In ka 60s iyo 70s ee qarnigii la soo dhaafay waaxaha cusub ayaa waxaa la aasaasay: «Heat iyo tamarta injineernimada», «Nidaamka iswada ee dhismaha gacanta» iyo kuwa kale; saldhig u qalab iyo farsamo la sameeyay, laboratories cusub iyo corpuses waxbarasho la dhisay degaanka gobolka Moscow ee, wada jir ah ula dejiyey cusub ee ardayga. Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee taariikhda MGSU ahaa abuurista kooxaha dhismaha ardayga. laga bilaabo 1956, ardayda MISI sannad walba ku qaatay semester xagaaga at goobaha dhismaha oo dhan ku wareegsan dalka. In ka 80s iyo 90s ee qarnigii XX ee machadka ayaa si guul leh horumarinta. Waxaa soo hagaagay ay hawlaha waxbarasho iyo cilmi-. In 1988 Ururka Waxbarashada iyo Methodics ee injineernimada sokeeye u gaarka ah dagaal la aasaasay oo ku saleysan MISI. Waxay ka kooban 28 machadyada farsamada tacliinta sare iyo qaar ka mid ah 1000 warshadaha, AMK, machadyada farsamada Ruush tacliinta sare, waaxaha injineernimada sokeeye. Ururka Caalamiga ah ee Hay'adaha Waxbarashada Sare ee Civil Engineering la aasaasay 1991. Maanta waxaa madax u ah Birmingham ee MGSU, Volkov Andrey Anatolyevich. In 1993 Machadka bedelay xaaladda - waxaa loo baxshay Moscow State University of Engineering Civil (MGSU). In 2010 University la siiyey xaaladda «University Research Qaranka», si siman wax ku ool ah fulinta hawlaha waxbarashada iyo tacliinta ku salaysan mabaadi'da dhexgalka ee sayniska iyo waxbarashada. Xaaladda of «National University Research» waxaa lagu taagaa Dowladda Federation Ruush ee soo socda 10 sano in natiijada doorashada ee tartan rasmi ah ee barnaamijyada horumarinta ee jaamacadaha, loogu talagalay shaqaalaha ka mid ah tilmaamaha mudnaanta horumarinta ee sayniska, technology, qalabka, laamaha dhaqaalaha, gudbikaraa bulshada, horumarinta iyo sal-dhigida ee soo saaridda of teknoolajiyada sare, jaamacadaha si siman wax ku ool ah fulinta barnaamijyada waxbarasho ee waxbarashada xirfad sare xirfadeed iyo postgraduate iyo fulinta asaasiga-faahfaahsan oo codsatay cilmi sayniska on tiro balaadhan oo ah cilmiga. Xilligan la joogo MGSU waa horseedka machadka injineernimada sokeeye ka mid ah tacliinta sare ee Ruushka. Wuxuu ka kooban yahay University 10 machadyada weyn, in ka badan 50 waaxyaha, fulinta tababarka ee ku takhasusay tiro balaadhan oo ah meelaha sayniska. Waxaa jira 40 shaybaarrada sayniska gaar ah; in ka badan 50 dhismayaasha cusub ayaa cilmi sayniska iyo hawgal gudbikaraa oo ka mid ah design iyo dhismaha dhismayaasha ammaan ah oo raaxo, dhismayaasha iyo kaxeynayo, isagoo pool cusub oo aqoonta cusub ee injineernimada sokeeye. Waxaa jira haatan ka badan 18000 ardayda wax ka barata Jaamacadda. MGSU leeyahay 6 laamaha gobolka Moscow iyo isku laan gobolka Samara ah, 8 Xafiisyada gobolka Moscow ee, 3 xafiisyo Tumen ah, gobollada Smolensk iyo Tula, iyo sidoo kale xafiisyo ku Jamhuuriyadda Bashkortostan iyo gobolka Stavropolsk. Heerka sare ee MGSU qalin xaqiijiyay Certificates of waraaqaha ee hawlaha waxbarasho ee Jaamacada in ay shuruudaha Standard Caalamiga ah ISO 9001:2008. Shahaadada waxaa lagu abaal by shirkadda Swiss SGS, qayb isagoo ka mid ah aqoonyahanada dalka ee International Aqoonsiga Forum la aqoonsan yahay 140 dalalka dunida.
Ma rabtaa wada hadlaan Moscow State University of Engineering Civil ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Moscow State University of Engineering Civil rasmiga ah Facebook
Moscow State University of Civil Engineering dib
Ku biir si ay ugala hadlaan of Moscow State University of Engineering Civil.
Novosibirsk State University of Dhaqaalaha iyo Maamulka Novosibirsk
University Research Qaranka “MIET” Zalenograd